Noravan’ny Manampahefanan’i Skopje Ny Tranon’ireo Fianakaviana Roma’, Ary Tsy Noraharahiana Avy Eo Ny Manjò Azy Ireo · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Septambra 2016 9:24 GMT
Tsy mbola taitra amin'ny hetsi-panoherana ataon'ireo niharam-boina ny manampahefana hatramin'izao. Nasaina nifindra tao amin'ny vondrona tsy manan-kialofana ao amin'ny toby efa ratsy ao Čičino Selo ivelan'ny tanàna izy ireo, izay nolavin'ireo fianakaviana satria tery tsy omby azy rehetra, ary ratsy dia ratsy ny fari-piainana ao noho ny monina eny an-kalamanjana. Ny ankamaroan'ireo olona ireo dia mivelona amin'ny alalan'ny fanangonana tavoahangy plastika sy sakafo eny amin'ny fanariam-pako, izay taterin'izy ireo amin'ny bisikileta avy eo. Manohintohina tanteraka ny fahafahan'izy ireo manangona tavoahangy plastika ho amidy eny amin'ny orinasa mpanodina akoran-javatra ny halavirana, sy ny famindran-toerana ivelan'ny tanàna.
Nilaza ny tsy fisian'ny firaharahiana eo amin'ny governemanta sy ny fampahalalam-baovao ho mariky ny fanavakavahana mitohy atao amin'i Roma ao amin'ny fiarahamonina Makedoniana ireo mpikatroka sasany. Tamin'ny fanambarana ho an'ny Global Voices i Ljatife Sikovska, avy ao amin'ny Foibem-pampianarana Roma Ambrela, no nanazava ny maha zava-doza ny toe-javatra iainan'ny vondrona tsy manan-kialofana :
Nahazo fanampiana avy amin'ny fikambanana tsy miankina ireo Roma ireo teo anelanelan'izany. Nanome fitaovana mitentina eo amin'ny 4500 dolara eo ny Orina Mpanasoa Open Society – Macedonia (FOSM) .